पाकोको मेन नयाँ रोमांचका साथ फिर्ता | बेजिया
'लॉस होम्ब्रेस डी पको' को फिर्ती नजिक र नजिक!
सुसाना Godoy | 04/05/2021 14:00 | समाचार
'पाकोको मान्छे' तिनीहरू ती शृंखलाहरू मध्ये एक हुन् जुन हाम्रो टाउकोमा अझै पनि झुण्डिरहन्छ। यो २०० 2005 को कुरा हो जब हामीले पहिलो पटक पुलिसको तिकड़ीलाई देखेका थियौं तर जीवनको लागि साथी रहेछ। उसको साहसिक कार्य, उनको परिवार र माया वा हृदय विच्छेदले चाँडै हामीलाई सानो पर्दामा अंकुश लगाउँदछ।
पाँच वर्ष पछि, जीवनको सबै चीज जस्तै यो अन्त आउँदै थियो। एउटा अन्त्य जसले सँधै धेरै पात्रहरू श्रृंखलाबद्ध भईरहेको थियो भन्ने तथ्यको बाबजुद पनि हामीलाई अझ बढी चाहिन्छ। ठिकै छ, अब ऊ फेरि नयाँ आत्माको साथ फर्किनेछ जुन हामी चाँडै देख्न सक्नेछौं एन्टेना।!
1 'लस होम्ब्रेस डे पाको' को ठूलो सफलता
2 'लस होम्ब्रस डी पाको' मा कति मौसम र एपिसोडहरू छन्?
3 एन्टेना series श्रृंखलाको लागि नयाँ साउन्डट्र्याक
4 हामी कहाँ 'लॉस होम्ब्रेस डे पाको' देख्न सक्छौं?
'लस होम्ब्रेस डे पाको' को ठूलो सफलता
यद्यपि कहिलेकाँही यो सबै श्रृंखलाहरूको साथ हुन्छ, जहिले पनि यसको प्रत्येक मौसममा समान सफलता हुँदैन। तसर्थ, जब यसको केहि चरित्रले यसलाई छोड्दछ, सायद दर्शकहरूको गिरावट एकदम महाकाव्य हुन सक्छ। तर सत्य यो हो कि जब 'पाकोको मान्छे' टेलिभिजनमा पुग्यो उनीहरूले कसरी परिवर्तन भएको देख्यो। उनीहरूसँग हामीले चाहेका सबै थोकहरू थिए र यो राम्रो हास्य, भावनात्मक क्षणहरू र रोमान्स थियो, सबै जासूस विधासँग जोडिएको थियो।। Passedतुहरू बित्दै जाँदा, नयाँ पात्रहरूले अवस्थित कथानकहरूमा थपिदिए र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बन्न पुगे, प्रेम र ईर्ष्याको नयाँ कथाहरूको साथ। सार्वजनिक हितलाई फेरि ध्यान दिईन्छ भनेर केहि। यो सबै र अधिकको लागि, श्रृंखलाले राम्रो दर्शकहरू बनाए र यसको प्रशंसकहरू नयाँ सत्रको लागि रोइरहेका थिए।
'लस होम्ब्रस डी पाको' मा कति मौसम र एपिसोडहरू छन्?
श्रृंखला, अहिले सम्म, कुल se मौसमहरु छ र ती सबैले केवल ११117 एपिसोडमा थप गर्दछ। सबै मौसमको हिसाबले उस्तै एपिसोड थिएन। दोस्रो मौसममा जस्तै कोही-कोहीले हामीलाई १ in जनासँग खुसी बनाए, जबकि सबैभन्दा सामान्य कुरा के हो भने उनीहरूसँग १२ वा १ 14 थिए। यो सम्भावित फिर्ताको कुरा हुँदा अप्रिल २०२० मा यो महामारी र कैदमा परेको थियो। फिलिम सम्भव भएमा त्यो गर्मी सुरु हुने आशा गरिएको थियो। पाको टस यसमा हुनको लागि पहिलो पात्रहरू मध्ये एक जस्तो लाग्यो। तर चाँडै नै, सबैभन्दा राम्रो नामहरू एक पटक हामी सबैलाई जित्ने टोली गठन गर्न दिइयो। वास्तवमा २०२० को ग्रीष्म Micतुमा, मिशेल जेनर र ह्युगो सिल्भाले पनि नयाँ सिजनमा आफ्नो उपस्थिति पुष्टि गर्नेछन्।
एन्टेना series श्रृंखलाको लागि नयाँ साउन्डट्र्याक
हामीले बोलेका छौं कि कास्ट मर्मत सम्भार भैरहेको छ, त्यसैले हामी फेरि महान नायकहरू र कमिशनरसहित सबै प्रहरीहरूको सबैभन्दा क्लुलेस समूह देख्नेछौं। तर यदि केहि परिवर्तन भएको छ भने, यो यसको ध्वनि ट्र्याक हो। अब यो पेश गर्ने जिम्मामा रहेका एस्टोपाको पालो हो 'एल मादेरो'। यो नयाँ गीतले 'लॉस होम्ब्रेस डे पको' को नयाँ सत्रमा किक गर्नेछ। यद्यपि तपाइँ पिनोइज समूह निश्चित रूपमा सम्झनुहुन्छ, अब यो एस्टोपा हो जसले सफल श्रृंखलाको ट्युन थप्न लिन्छ।
हामी कहाँ 'लॉस होम्ब्रेस डे पाको' देख्न सक्छौं?
यस्तो देखिन्छ कि नयाँ १ 16 अध्यायहरू दुई सत्रहरूमा विभाजन भइरहेको छ। तर पहिलोका लागि, यो एन्टिना on मा प्राइम टाइम तालिकामा प्रीमियर हुने आशा गरिन्छ र त्यसपछि एट्रेसलेयर प्रीमियम मार्फत हेर्न जारी राख्नुहोस्। यो केहि श्रृंखलाहरूको साथमा भएको कुरा हो जुन हामी पछि स्पष्ट रूपमा देख्न सक्षम भएका छौं। 'लॉस होम्ब्रेस डे पको' को साथ के हुने आशा गरिन्छ भनेर। सबैसँग यो प्लेटफर्म नभएकोले तिनीहरू फेरि टिमलाई भेट्न चाहन्छन्, राम्रोको लागि स fighting्घर्ष गर्दै र पुरानो माया सम्झँदै। के तपाइँ अहिले जारी हुन चाहानुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » समाचार » 'लॉस होम्ब्रेस डी पको' को फिर्ती नजिक र नजिक!
Book तरीकाहरू तपाईको पुस्तक संग्रहलाई व्यवस्थित गर्ने